Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 29/03/2020)
Kulo post, sizozama ukuze ufunde kabanzi mayelana Local Ukubhuka zemininingwane Ticket nge-inthanethi. Ezimweni eziningi, abahambi bathambekele ukulinda kuze kube umzuzu wokugcina bese ukubhuka ithikithi yabo. Ukubhuka amathikithi esitimela ngomzuzu wokugcina akuyona kuwukuhlakanipha.
Ngezinye izikhathi ukubhuka ithikithi isitimela inthanethi, ikunikeza enemininingwane mayelana amadili kanye namacala the amathikithi travel yakho. Amathikithi ngokuvamile ekhishwe ezitimeleni ka indlela ethile. Uma u udabula ukuthi umzila nsukuzonke, khona-ke kumelwe bathenge amathikithi ukuthi ihambisane izipesheli.
Indlela ehlakaniphile ukulondoloza imali ukuze ukuhamba phakathi off-inkathi. I off-inkathi imele umuntu ongeyena-umkhosi isikhathi. Izinyanga-February-April futhi Juni-Okthoba ezibhekwa njengenhlangano off-inkathi. Abavakashi ngokuvamile ungakwenzi zabo Local Ukubhuka zemininingwane Ticket nge-inthanethi.
Uma ucwaninga ithikithi noma kunini, ke uyojabula ukwazi ukuthi ungenza ukusetshenziswa kwabo noma kunini uma ufuna. Umehluko kuphela phakathi kwawo amathikithi kusenesikhathi yokubhuka wukuthi ungasebenzisa amathikithi kunini kuphela ngosuku ikhambo.
Nokho, awayona onokwethenjelwa futhi lapho ukhona ngenxa ukuhamba ibanga uhambo olude, ke kusizuzisa ngaso sonke isikhathi ukwenza ukusetshenziswa Local zemininingwane Ticket yokubhuka nge-inthanethi, futhi ungakwazi beze kithi ku Londoloza Isitimela Iwebhusayithi noma usebenzise yethu Facebook Ukuze zemininingwane Ticket Usizo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/when-you-should-do-your-local-train-ticket-booking-online/ - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#wendawo #localtrain #localtrains #trainbooking trainticket